Video inay PSP-Sida loo Beddelaan Video inay PSP?
> Resource > Transfer > Sida loo raaxaysta Video ku PSP Xitaa PSP 3000?
Tani tutorial tallaabo-tallaabo loogu talagalay in lagu caawiyo in aad heshid bilaabay isticmaalaya Video inay PSP Video Converter ( Video Converter u Mac users la Mac wax socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa iwm) kuwaas oo ku tusaan sida loo badalo video inay taageero PSP video, si aad ku raaxaysan kartaa wixii video on PSP xitaa PSP 3000. Tani Video inay PSP Converter ma aha oo kaliya u qabata sida PSP video Converter laakiin editor video iyo video kala iibsiga sidoo kale sida awooda badan. Waxaad ka heli doontaa tallaabooyinka faahfaahsan ee soo socda 3 qaybood.
Qaybta 1aad: Sida loo badalo Video ku PSP Xitaa PSP 3000?
Qeybta 2: Sida loo edit aad video for PSP Lite 3000, PSP Slim 2000, PSP 1000?
Qeybta 3: Sida loo wareejiyo video dhaxeeya PSP iyo PC?
Qaybta 1aad: Sida loo Beddelaan Video ku PSP Xitaa PSP 3000?
Qaabab Input video taageeray:
Ku dhowaad dhammaan heerka videos (avi, mkv, mp4, wmv, flv, mpeg, fuliyaan shirkad, rmvb iwm), HD (Qeexitaanka Sare) video, iyo AVCHD videos (mts, m2ts, TS, TP, trp, iwm)
Qaabab Output video for PSP:
PSP qaab MP4 iyo PS3 qaab MP4 video ay ka mid yihiin 480p, 720p, 1080p (qeexidda video sare)
Iyada oo kaliya ka dib markii saddex tallaabo, waxaad ku dhameysan kartaa diinta videos leh tayo sare iyo xawaaraha super si degdeg ah oo iyaga ku raaxaysan aad PSP Lite 3000, PSP Slim 2000, PSP 1000.
Talaabada 1: Import video files si video ay u PSP Converter
Guji "Add Files" button image inay dajiyaan video / files audio ama jiidi files si ay suuqa kala file liiska si toos ah. Halkan dhan qaabab laga keeno oo ay taageerayaan.
Dooro qaab aad doonayso inaad wax soo saarka ka soo liiska qaabka wax soo saarka kala saaraa; sheeg buugga wax soo saarka si uu u badbaadiyo files gediyay adigoo riixaya Device> Game > PSP . Oo waxaad sameyn kartaa la xiriira video /-beegyada uu audio (xallinta, heerka jir, video encoder, heerka yara, heerka muunad iyo channel audio iwm) ee adigoo gujinaya "Dejinta" button image.
Tallaabo 3: Ka billow si loogu badalo video in PSP
Ka dib markii ay wax walba u sameysan yahay ayaa si fudud ku dhufatey "Beddelaan" button. A screen horumarka diinta la soo bandhigi doonaa inta ay socoto meesha aad ku eegaan karo video ah. Users nidaamyada gaabis ah u badan tahay in ay doonayaan inay gab Xiisaha sida u adeegsanayaa wareegyada processor ka badan.
Qeybta 2: Sida loo edit video for PSP Lite 3000, PSP Slim 2000, PSP 1000?
Marka laga reebo shaqo ee diinta aasaasiga ah, waxa kale oo aad samayn kartaa qaar ka mid ah tafatirka in video ah si aad u hesho video jeclaystay PSP. Hit ah " Edit "button image inay soo qaadaan qalabka tafatirka qaar ka mid ah kaas oo la soo bandhigi doonaa hab ah screen kala-waqtiga dhabta ah si aad u samayn kartaa dheellitirka midabka, saturation, saamaynta, iwm oo barbar file asalka, oo markaas aad u awooddo isticmaasho Video inay PSP Video Converter si ay u gutaan aad ee qaybsama ama ku biiro video looga baahan yahay kala duwan. Halkan hoose waxaa ku qoran talooyin qaar ka mid ah:
Talo 1: goo video
Haddii aad u doonayaa inaan u badalo clip ka file video ah, waxaad riixi kartaa " goo "in ay qabsadaan clip kasta oo aad rabto. In suuqa kala goo ah, aad jar karaa dhererka video adigoo jiidayeen Wakhtiga uu bilaabanayo iyo dhamaanayo sliders ama adigoo sameynaayo mar-beegyada uu u duurka kasta oo u dhiganta.
Talo 2: Dalag video
Guji " Dalag "oo aad resize kartaa video ah. Waxaad ka heli kartaa size doonayo ee video aad PSP doorataa muuqa, waxayna jiidayeen jir lana siii ama dejinta xuduudaha la xiriira.
Talo 3: Dheellitir video saamaynta
Waxaad qaar ka mid saamayn gaar ah u video, sida Gray, Emboss, xun iyo Old Film ka dhigi kara. Waxaad heli doontaa eegis ku ogaado saamaynta video ka hor iyo ka dib la qabsado oo la laba-waqtiga dhabta ah muraayadood previewing.
Talo 4: watermark Edit
Haddii aad rabto in aad hesho video ah shakhsi ay ku daray macluumaad qaar ka mid ah waxaa sida watermark, aad oga karaa iyadoo intaa ku dartay mid ka mid macluumaad image text ama. Waxaad xaq u leeyihiin inay resize qoraalka / image ku daray.
Talo 5: Ku dar fur-in Cinwaan
Haddii aad ka heshay qaar ka mid ah videos leh fur-galka baahisey Cinwaan (sida caadiga ah qaab SRT) ah, waxaad ku dari kartaa Cinwaan in ay video ka hooseeya ku jira " Cinwaan "tab. Fiiro gaar ah: aad file ayaa isha dejinta waa in file MKV, iyo siib -in file Cinwaan waa in qaab SRT. Oo waa inaad weli u leeyihiin in ay ku riday file MKV iyo file Cinwaan galka isla isku magaca leh.
Mararka qaarkood, waxaad ka heli doontaa waxa ay caajis si ay u gudbiyaan files dhaxeeya PSP iyo PC. Hadda waxaad u isticmaali kartaa si PSP Video Converter si ay u gudbiyaan files si PSP si toos ah ka dib markii uu qaab beddelidda la sameeyo. Hadda si xor ah aad ku wareejin karo files dhexeeya PSP iyo PC.